Racist Eleven Media Group should be charge at ICC | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« U Tin Oo interview
Blasphemy or Sacrilege on Insulting the Sanctity of Buddhism »
This entry was posted on October 4, 2012 at 7:39 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
6 Responses to “Racist Eleven Media Group should be charge at ICC”
My friend wrote>>>အခုပဲ ရန်ကုန်မြုိ့ဘင်္ဂလားဒေရှ့်သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ် …မီဒီယာတွေလည်းစုံနေတယ် လုံခြုံရေးတွေလည်းအများကြီးပဲ….
Not to act fairly with Justice and protection to minorities like now: control immediately, arrest the culprits, promise to build back the damaged houses and temples.
Do Bamas and Rakhines wish Bangladesh government to act like Myanmar Military, Myanmar Gov, Lone Hteins (Riot Police), Police, Rakhine Gov, Myanmar Media, Myanmar Online Activists etc like one sided to continue with genocide?
No way man, Bangladesh would never do shamelessly like Myanmar Racist Criminals.
October 4, 2012 at 11:33 am | Reply
U Naing Win commented under Hmuu Zaw’s post……အကုသိုလ်ဝင်နေရှာသည့်( နင် နေသည့် )Dr.သန်းထွဋ်အောင်( EMG ),
” EMG – ရန်တိုက်ပေးနေသည်။
EMG – သွေးထိုးနေသည်။
EMG လူသတ်သမား –
နားမယောင်လေနဲ့ သတိထား။ ”
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ခင်ဗျား – ဆရာဝန်ဘွဲ့ရပြီး၊လူနာတွေကိုဆေးကုမစားတာ တော်သေးတယ်လို့ပြောရပါမယ်( ထူးချွန်သောအထူးကုဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်၊ဆရာဝန်ပညာဖြင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသဖြင့်၊အားကစာ
းဂျာနယ်ထုတ်ရောင်းကာ အယောင်ဆောင်ဂျာနယ်လစ်ဘ၀ဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ရပါသည် )။ယောင်္ကျားဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး၊စိတ်ဓါတ်က တော်တော်လေးကို အောက်တန်းကျနေမှန်း အခုမှဘဲသိပါတော့တယ်။
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ပြည်တွင်း ပြည်ပမီဒီများကိုသာမက၊အကြောင်းကြောင်းကြောင့်နိုင်ငံရပ်ခြားကိုရောက်နေကျတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကို မိဘသဖွယ် သားသမီးအရင်းတွေလိုသဘောထားပြီး၊ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲ မိခင်နိုင်ငံသို့အမြန်ဆုံးပြန်လာဖို့ နွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။ဒါဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်၊နိုင်ငံတော်အတွက်ပါ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့စေတနာဟာ အထူးဘဲကြည်ညိုလေးစားစရာကောင်းလှပါတယ်။
အဲဒီလိုပါဘဲ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့စေတနာအပြည့်နဲ့လမ်းညွှန်မှုကို အလေးထားဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး၊နိုင်ငံတော်ရဲ့စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ မီဒီယာကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်အထူးကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ပါ။
အဲဒါကို ခင်ဗျားလိုဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး၊ဆရာဝန်အလုပ်လုပ်ရင် ထမင်းငတ်သွားနိုင်တဲ့၊ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းမရှိလို့ ဂျာနယ်လစ်သမားကောင်းတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့တာကို ( EMG ရဲ့ဂျာနယ်လစ်တွေထက်ပိုပြီးအရည်အချင်းရှိတဲ့ ) ခင်ဗျားထက်ပိုပြီးအရည်အချင်းရှိတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အခြားပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကို ဘာဖြစ်လို့အပြစ်ရှာ၊အပြစ်မြင်နေရတာလဲလို့ပြောပါရစေ။EMG ဂျာနယ်ကို ကောင်းအောင်၊အဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်နိုင်တော့ရင်လဲ၊ တခြားမီဒီယာတွေကို အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မနေတော့ဘဲ၊ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ရေ … EMG ဂျာနယ်ကိုလိမ်လိမ်မာမာနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီး၊ခင်ဗျားလဲ EMGရဲ့CEO ရာထူးကနေအပြီးအပိုင် သိက္ခာရှိရှိ ထွက်ပေးလိုက်ပါဗျာ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကအစ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအပါအ၀င် တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲများက စေတနာနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပေးနေတာကို ခင်ဗျားက ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုထဲကိုကြည့်ပြီး၊ဘယ်သူ့ကိုမှ အကောင်းမမြင်နိုင်တော့ဘဲ တစ်နေ့တစ်နေ့သူများမကောင်းကြောင်းကို ဘာတွေပြောမလဲ၊ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုပြီးတွေးနေ ရေးနေရတာကိုက၊အကုသိုလ်ဝင်နေပါပြီ။အမှန်တရားတွေကို အမှန်အတိုင်းမြင်အောင်၊အတည့်အတိုင်း မြင်ရအောင် မှန်ကိုထောင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဦး ဒေါက်တာရယ်။
နောက်ပြီး ဒေါက်တာ မေ့နေတာရှိပါသေးတယ်။အခုလို သူများတွေကို ယောင်္ကျားတန်မဲ့ မနာလိုတိုရှည်ဖြစ်နေရင် ခင်ဗျားမှာရှိတဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါက ပိုဆိုးလာပါဦးမယ်။ စိတ်ကောင်းမထားတတ်ရင်၊ဒေါသတွေထွက်နေရင်၊သေခါနီး ဘ၀ကူးမကောင်းဖြစ်ပြီး၊အပယ် ( ၄ )ဘုံကိုရောက်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။သတိနဲ့တရားသဘောဆင်ခြင်ပြီးနေထိုင်ပါ ဒေါက်တာရယ်။
နောင်ဘ၀တွေမှာတော့ ဒေါက်တာတို့EMG အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ အမှန်ကိုအမှန်မမြင်နိုင်တော့တဲ့ (အ၀ိဇ္ဖာ၊တဏှာတွေ ဖုံး)အကုသိုလ်တွေဝင်နေရှာတဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့EMG ကို သနားမိပါတယ်။
နားမယောင်လေနဲ့ သတိထား။ “
I AGREE WITH Dr. သန်းထွဋ်အောင် “အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာ အမြဲတမ်း ဒွန်တွဲနေတာပါ။ ဒီအတွက် မဟာဗျူဟာ အချက်အချာ အကျဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ တိုးတက်စရာရှိရင် သူများတွေ လိုက်မမီဘူး။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း ‘ကျွန်’ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နိုင်ငံ ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်တယ်။ ဒီပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ မရှိမဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း တစ်နည်းဆိုရရင် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ကျိန်စာသင့်ခံခဲ့ရတာပါ။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်ခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ စစ်ဘုရင်ဝါဒနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပထ၀ီအနေအထား၊ သမိုင်းကြောင်း စစ်ပွဲတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တိုင်းပြည်က ဆင်းရဲမွဲတေ နိမ့်ကျခဲ့ရတယ်။ အာရှတိုက်မှာ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်နိုင်တဲ့ ရေမြေ သဘာဝပထ၀ီ အနေအထား၊ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်တဲ့ လူမျိုးနွယ်စုတွေ ရှိနေပါလျက်နဲ့ အဆင်းရဲဆုံး အမွဲတေဆုံး၊ အောက်တန်း နောက်တန်း အကျဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို တကယ်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ လွတ်လပ်မှုသဟ ဇာတဖြစ်နိုင်တဲ့ Strategic Thinking မဟာဗျူဟာကျတဲ့ တွေးခေါ် မြော်မြင်မှုတစ်ခုတော့ လိုလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလမ်းကို သွားကြမလဲ၊ ဘယ်လမ်းကို ရွေးကြမလဲ။” BUT သန်းထွဋ်အောင် had WRONGLY chosen the ULTRANATIONALISM and ISLAMOPHOBIA. I hope Dr Ne Oo, Dr. Rita Aung and my LYC friends could madeabetter choice for our beloved country.
October 4, 2012 at 2:12 pm | Reply
If that is TRUE, Hmuu Zaw should be removed from office and banned from using Internet because he had started the FALSE news to startaHATRED on ARMED ILLEGAL INVADER Bengalis or Rohingya. He FORCED the whole country including ALL the Muslims to support them because if do not support…could be labled as traitor. He fanned the BLIND Ultra-Nationalism in the whole country: even Daw Suu, NLD and 88 generation had to toe the line.http://burmese.voanews.com/content/burma-forum-border-affairs-minister-voa-interview/1517878.html
junk beater sitting Says:
August 1, 2020 at 1:50 am | Reply
junk beater sitting